ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ငါလိုလူမျိုးတစ်ယောက်ယောက်ကြည့်ပါ – ယခုအဘယ်အရာကို?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 07 2020 |5မိဖတ်ပြီးသား
ဒါကြောင့်, သင်ချိန်းတွေ့ sites များ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုတက်လက်မှတ်ရေးထိုးင်နှင့်အမှန်တကယ်သင်ကြိုက်သလိုတစ်လူအနည်းငယ်ကပိုကောင်းသိကျွမ်းဖို့ကိုတွေ့ကြပြီ… ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ရက်စွဲ. သင်အခုဘာလုပ်ပါသလဲ?
ကောင်းစွာ, သင်ဆက်သွယ်ပါတစ်စုံတစ်ဦးကိုအဘို့အသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုတက်ကိုတင်နှင့်စောင့်နိုင်, သင်အစပြုလုပ်ဆောင်လျှင်မူကားသင်သည်ဖြစ်နိုင်အများကြီးပိုကောင်းရလဒ်တွေရလိမ့်မယ်. သင်စိတ်ဝင်စားဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကတွေ့ရှိပြီးပြောဆိုရန်စေ့ဆော်ခံစားရတဲ့အခါ “ဟေ့”, ပါရှိသောဖြစ်ပါဘူး! ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပဲသင်မှသိတင်းကိုကြားဖို့ချစ်စေခြင်းငှါ. နောက်ဆုံးတော့, သူတို့တစ်တွေပရိုဖိုင်ကိုဖန်တီး, ပဲသင်နှင့်တူ, တစ်စုံတစ်ဦးကအစည်းအဝေး၏မျှော်လင့်ချက်များအတွက်. သင်သည်ထိုသူတို့ကိုဆက်သွယ်ထွက်ရှာပါ မှလွဲ. သင့်အကျိန်းသေသိမည်မဟုတ်.
Ladies, မရှက်ပါနဲ့ – တို့သည်လိုက်ကြလိမ့်မှကိုချစ်!
တစ်စုံတစ်ဦးကိုဆက်သွယ်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများကိုအီးမေးလ်နှင့်အတူဖြစ်, တစ်ဦး instant message များပို့, ဒါမှမဟုတ် '' မျက်တောင်ခတ် ''.
ဒါကြောင့်သင်ပြောရတော့မှာဘဲအဘယ်သို့သောစဉ်းစားရန်သင့်ကိုပိုပြီးအချိန်ပေးသည်နှင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးခံစားရသောကြောင့်သင်တို့အနည်းငယ်အီးမေးလ်များကိုဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်င်မှီတိုင်အောင်ငါအလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ချွေတာဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်. သင်အချင်းချင်းပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရပြီးတာနဲ့, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည် chatting လုပ်နေကြတယ်စတင်နိုင်ပါသည်.
သင်ကပေးဆောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်, သင်အများဆုံးဖွယ်ရှိ '' Wink ကို အသုံးပြု. ကန့်သတ်သွားလိမ့်မယ်’ သို့မဟုတ် 'အပြုံးများ’ အလားတူသို့မဟုတ်တစ်ခုခု. ဤကဲ့သို့သောတစ်ခုခုပြောလိမ့်မည်ဟုသတင်းစကားများစည်သွတ်နေကြတယ် “နန်စီသည်သင်တို့အထဲ၌စိတ်ဝင်စားတယ်” သို့မဟုတ် “ဂျိုးသင်မှာမျက်လုံးမှိတ်ပြတယ်”. Wink နှင့်အပြုံးများဟယ်လိုပြောပေမယ့်သိသိသာသာတစ်စုံတစ်ဦး၏အကျိုးစီးပွား pique ဖို့သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ထားရန်လျင်မြန်တဲ့နည်းလမ်း. သင်တို့အဘို့သင့်သောစကားပြောခြင်း၏သမျှအတိုင်းပြုရကြမည်ဟုမှာဆိုတော့ဒါကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပရိုဖိုင်းရှိခြင်းအပေါ်ဖိအားတွေအများကြီးထည့်လိုက်တယ်.
အလားအလာရှိသောနေ့စွဲ Emailing တွေအများကြီးပရောပရည်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏. ပထမဦးဆုံးအီးမေးလ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ထိုသူတို့အားတုံ့ပြန်ရရန်ဖြစ်သည်, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကိုဖွင့်ဖို့. သင်သည်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားရပေမယ်သူတို့သည်သင့်အားပြန်လည်တုံ့ပြန်မည်အကြောင်းအဆုံးသတ်ကိုဖွင့်ထားခဲ့ချင်တယ်. တိုတိုနဲ့ချစ်စရာကောင်းသင့်ရဲ့အီးမေးလ်များကိုသိမ်းဆည်းထားပါ,. နောက်ထပ်အစွန်အဖျား: လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးအီးမေးလ်များ Barrage မပို့ကြဘူး, သူတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်လိုက်နာရန်နှင့်ချီစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစား. (သူတို့လွှတ်လျှင်4တစ်ပတ်လျှင်, သင်ပေးပို့4ဒါမှမဟုတ်တစ်ပါတ်။)
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများကိုမှမနျးွခငျးသည့်အခါ, ဖြစ်ဖို့ကြိုးစား, ကောင်းစွာ, လူ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခန့်အနည်းဆုံးအပိုဒ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုရေးပါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်သည်သူတို့အားသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာများနှင့် ပတ်သက်. ကြိုက်. ပရိုဖိုင်းအရေးအသား၏အခြေခံမူများအတော်များများအီးမေးလ်လျှောက်ထား, ဒီလိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့တည်းခိုအဖြစ်, ရိုးဖြောင့်ဖြစ်ခြင်း, နှင့်စာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါနီးစပ်သတိထားရမှာ.
အွန်လိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပြီးမေတ္တာကိုဆယ်ကျော်သက်ဒဏ်ခတ်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားစေနိုင်, မဟုတ်တဦးတည်းကဲ့သို့မြည်ခြင်းငှါမသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်. ကျွန်တော်တို့အများစုဟာအနည်းငယ်ပိုရင့်ကျက်ကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေပါသည်, တစ်သက်တာလက်တွဲဖော်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်အလားအလာရှိကြောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်. သင်ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းစတင်လာတဲ့အခါ, flirtation မှားတစုံတခုမျှမရှိ, မင်္ဂလာရှိသောဖြစ်ခြင်း, နှင့်ရယ်မော, ဒါပေမယ့်သေချာထိပ်ကကျော်မယ့်အောင်. လည်း, သင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုသွန်းလောင်းခြင်းဖြင့်စတင်မ, သင့်ရဲ့ဖြစ်သူ-အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ဖြစ်သူ-သိသာထင်ရှားသောအခြားအကြောင်းသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏အားလုံးပြောပြ. ထိုကဲ့သို့သောဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာတွေအကြောင်းပြောနေတာကိုရှောင်ရှားပါ, ကျန်းမာရေးကိစ္စများ, သင့်ရဲ့အလုပ်မဖြစ်မိသားစုအကြောင်းဒါမှမဟုတ်ပုံပြင်များ. ဒါကကြီးမားတဲ့ turnoff ဖြစ်ပါသည်, ကွာတစ်စုံတစ်ဦးကခြောက်လှစေရန်နှင့်တစ်ဦးမြတ်သောလမ်းကို. ထိုဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းမှာသင့်ရဲ့ကြာသပတေးနေ့ည Poker ကစားသို့မဟုတ်နေ့အဘို့ဆွေးနွေးချက်မျိုးကို Save. သင်တစ်ဦးတည်းသောမိဘဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ကလေးတွေအကြောင်းစကားပြောအနည်းငယ် bit ကိုရေခဲမချိုးနှင့်ဘုံမြေပြင်ကိုရှာကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကရင်ခုန်စရာ connection ကိုဆောက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်အောက်မေ့သတိရ, ဒါကြောင့်လည်းနိမ့်ဆုံးကိုစောင့်ရှောက်.
ဆက်ဆံရေးရှေ့ဆက်ရှေ့ဆက်ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်, သမ္မာတရားကိုနောက်ဆုံးမှာထွက်လာကြလိမ့်မည်. ရှေ့သင်ကိုယ်တိုင်တက်ဖြစ်မယ့်အစားအစအဦး၌မိုက်သောမုသားပြောဖို့ဝေးကောင်း၏င်, ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးအလားအလာဆက်ဆံရေးဟာဆိတ်ကွယ်ရာလဲကျရှိသည်ခံရဖို့သာ.
မည်သူမဆိုလိုလားနောက်ဆုံးသောအရာတစ်စုံတစ်ဦးရန်နှင့်တုန့်ပြန်တဲ့စာကိုပေးပို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, သူတို့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုအားလုံးဆက်ဆံရေးကိုပျက်ကွက်ကိုကြား, ကျန်းမာရေးပြဿနာများ, သို့မဟုတ်ငွေကြေးကျပ်တည်း. သင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတစ်နည်းနည်းသိလာအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါပျက်စီးခြင်းနှင့်မှောင်မျှဝေနိုင်ပါသည်. သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသေး, ရုံသင့်နောက်သမျှသောပစ္စည်းပစ္စယများကိုထည့်ပြီးအပေါ်ကိုရွှေ့. လတ်ဆတ်သောစတင်ရန်ပစ္စုပ္ပန်တူအချိန်မရှိဘူးင်!
သင်သည်သူတို့ profile တွင်စိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရှိတစ်ခုခုချီးမွမ်း.
ဒါကြောင့်လူတစ်ဦးရဲ့ profile ကိုဖတ်ရှုဖို့အရေးကြီးတယ်နေရာအရပ်ဖြစ်၏. ဒါဟာအကြောင်းပြောဆိုရန်သင့်သောအရာတို့ကိုပေးတော်မူ၏. ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးသောမိန်းမဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်သင်တဲ့လူကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရှာပြီးသူ့တူ Labrador ခွေးရှိလျှင်, သင်နှင့်တူတစ်ခုခုပြောနိုင်, “ဟိုမှာ. ငါ့နာမကိုကမာရိသည်သင်တို့ကိုငါ Labs ကရှိသည်သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile အတွက်သတိထားမိ. ကျွန်မလည်းဘာလုပ်!” ထိုအရပ်မှ, သင့်ရဲ့ခွေးကိုတစ်ဦးကိုအကျဉ်းချုံးဖော်ပြချက်တွေကိုပေး, သင်သည်နောက်ကျောကိုကြားပျော်မွေ့မယ်လို့ဖော်ပြထားခြင်း, ပိတ်လက်မှတ်ရေးထိုး.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ innuendos နှင့်အတူပထမဦးဆုံးမှာလွန်းအားကြီးသောအပေါ်လာနှင့်လူတစ်ဦးရဲ့ဓါတ်ပုံကိုအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်မမကြိုးစားပါ. '' နက်ရှိုင်းသောအနည်းငယ်ပိုတစ်ခုခုကိုရှာပါ’ အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုမိမိတို့ဖေါ်ပြချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်.
ပထမဦးဆုံးအီးမေးလ်၏အဓိက point ကိုသင်သတိထားမိမှာရန်နှင့်သင့်အားပြန်တုံ့ပြန်ရရန်ဖြစ်သည်. သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအလွန်စွန့်လွှတ်မထားပါနဲ့, သို့ရာတွင်ထိုသူတို့စိတ်ဝင်စားရရန်လုံလောက်သူတို့ကိုပြောပြ. သင်ကစကားလက်ဆုံသွားရဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်, ဒါကြောင့်မေးခွန်းတွေမေးထားတာကောင်းတယ်, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်များလွန်းမမေးကြဘူးအဖြစ်.
ဘုံ၌သင်တို့အမှုအရာရှိသည်ဖော်ပြထားခြင်း, ထိုသူတို့နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းသို့မဟုတ်နှစ်ခုလောက်မေး.
ဥပမာအားဖြင့်, သင်ပထမဦးဆုံးသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူစာတိုပို့စနစ်စတင်လာသောအခါ, သင်မေးနိုင်, “သင်သည်ဤရက်သတ္တပတ်ပျော်စရာဘာမှမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ?” “သင်တို့ကိုတနင်္ဂနွေဆိုအလွန်ကြီးစွာသောအစီအစဉ်ရှိပါသလား?” ဒါဟာသင်စပ်စုပုံခ​​ြင်းမရှိဘဲလူတစ်ဦးအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူကူညီပေးပါမည်. သင်ကနေစဉ်များအတွက်အထူးတစ်စုံတစ်ဦးကများနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ကြပြီးနောက်, သင်၏နှစ်ဦးတွေ့ဆုံရပါလိမ့်မယ်သောအခါအသင်ကာလ၌ဖွင့်လှစ်ရှာဖွေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့အပြစ်မဲ့မေးခွန်းများကိုသုံးနိုင်တယ်.
ထိုအချက်ကိုစောင့်ရှောက်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအားဖြင့်ထွန်းလင်းတောက်ပစေခြင်းငှါကြိုးစား. ထိုအခါ, လက်မကောင်းတစ်ခုအုပ်ချုပ်မှုကိုဖြစ်ပါသည် “ချီးမွမ်းနှင့်မေးခွန်းများ။” လူတစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုများကိုတခုတခုအပေါ်မှာစေတနာစိတ်အားချီးမွမ်း, စာအရေးအသားစတိုင်, သို့မဟုတ်အသက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေအများကြီးပြောလိမ့်မယ်.
ဒီနေရာမှာကောင်းမှုစုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်, ရေခဲကိုချိုးဖောက် starter အကြောင်းအရာအသစ်များ:
အကယ်. တူညီသောဧရိယာတွင်နေထိုင်ပါက, ထိုဒေသတွင်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်, သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာကမှနှင့်သက်ဆိုင်သော. အကယ်. တူညီသောဧရိယာတွင်နေထိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်, သင်သည်သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာလောက်သောမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းနိုင်.
ဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်ကိုလည်းကောင်းတစ်ဦးစကားပြောဆို-starter များမှာ; အများဆုံးလူတိုင်းဂီတသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်အချို့မျိုးကို likes.
ဒီတစ်ခါလည်း အကယ်. တူညီသောကောလိပ်ကျောင်းခြင်းငှါသွားကြ၏သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသေး, ပြိုင်ဘက်ကကျောင်း. ပြိုင်ဘက်ကျောင်းများမှာပျော်စရာထိုးနှက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲအမြဲတမ်းရေခဲကိုချိုးဖျက်ဖို့တစ်ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
သင်သည်ဤညာဘက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်, ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်ပြန်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်. သတိရ, သင်ကတုန့်ပြန်ရရှိလျှင်ပင်, သင်သည်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားစောင့်ရှောက်ရဦးမယ်. လိုက်နာသောအီးမေးလ်များအတွက်, မေးခွန်းများမေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် complimenting စောင့်ရှောက် (ရိုးသားမှုနှင့်အပြုသဘောကျန်ရှိသောနေစဉ်). သင်သည်သက်သာခံစားရတဲ့အခါ, သင်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့တူဆက်သွယ်ရေးများပိုမိုရင်းနှီးသောပုံစံများပေါ်ရွှေ့နိုင်, တယ်လီဖုန်း, နောက်ဆုံးမှာတော့, လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံ.
တစ်နေ့ကိုသွားပြီးသူတို့ကိုသင်မှမကြားကြလျှင်, အစားထက်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့စာတိုက်ပုံးလွှမ်းမိုး, အတိုတထွက်ခွာ, reply သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏လှုံ့ဆျောမှသေးငယ်တဲ့အရိပ်အယောင်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုချိုမြိန်.
သင့်ရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံကိုထုတ်မပေးပါနဲ့, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအီးမေးလ်လိပ်စာ, ဒီကနဦးကအီးမေးလ်တွင်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်; သင်သည်နှစ်ခုစလုံးစိတ်ဝင်စားတယ်ကတစ်နေရာရာမှာသွားရဲ့သရုပ်င်သည်အထိစောင့်ဆိုင်း.